Sida loo isticmaalo taariikhqorihii cod kama dambaysta ah si ay u qoraan cod ka website
> Resource > Video > Sidee loo Diiwaan Voice la Voice Ultimate ah oo taariikhqorihii
Marka aad isticmaalaysa internet, waxaad maqli karo codkooda meel kasta sida heesaha ama music soo jeeda, waayo, videos. Ma doonaysaa in ay u qoraan iyaga si loo badbaadiyo on your computer ama gubi galay cajalladaha? Waxaad tahay meel sax ah si aad u hesho cod kama dambaysta ah recorder- Streaming taariikhqorihii Audio . Waxaa u qoraan karaan codkooda aan khasaaro tayada iyo xitaa aad sameyn kartaa waqti si ay u qoraan playlist ka mid ah codadka. Waa wax cajiib ah, sax? Just i raac si aad u aragto sida ay u hoos ku shaqaysaa.
1 Ku rakib oo taariikhqorihii ahaa cod kama dambaysta ah
Download oo taariikhqorihii ahaa cod kama dambaysta ah oo lacag la'aan ah. Ka waxaa lagu rakibay on your computer. Hubi in aad soo dajiyo version saxda ah. Labada nooc oo barnaamijka leeyihiin hawlaha la midka ah, sidaas darteed waxaan kaliya ka hadli doonaa version daaqadaha in this article.
2 Record codad la taariikhqorihii cod kama dambaysta ah
Marka aad furto barnaamijka dib markii la rakibey, waxaad arki doontaa badhanka weyn Record geeska bidixda ah ee kore. Waxaa Riix oo ka tago barnaamijka ka shaqeeya ee asalka ah.
Markaas waxa la joogaa wakhtigii si aad u eegto cod aad rabto si ay u qoraan. Fur website a music video ama. Qaado Spotify sida tusaale ahaan ah. Codka Riix inuu u ciyaaro. Daqiiqo ayaa cod u bilaabo inuu ciyaaro ka dib markii naqdida, barnaamijka bilaabi doonaan in ay ka shaqeeyaan waqti isku mid ah.
Haddii aad qabto farabadan oo codad si ay u qoraan, waxaad riixi kartaa icon Saacad-sida hoose oo dhigay muddo waqtigii lagu qoro. Dabcan, waxa muhiimka ah waa in ay tahay in aad hubiso in internet-sami ah u dhaco.
Dooro file cod Maktabadda iyo riix badhanka dar Lugood in, ka dibna aad codka waxaa loo wareejiyey Lugood, muujisay in playlist SAR ka heli kartaa. Iyadoo Lugood, aad u hagaagsan karaa codka qalabka Apple aad sida iPod ama dadka kale.
Wixii qalab kale sida taleefanka Samsung, waa in aad marka hore xaq-riix codka dooro Open ee Folder, si aad u ogaato meesha codka waxa lagu kaydiyaa. Markaasay codka wareejiyo gacanta.
Fiiro gaar ah: Ka dib markii codkii gudbaayo Lugood, waxaad u isticmaali kartaa sida gubi lacag la'aan ah si ay u gubaan faylasha codka galay disc ah.
Waa maxay xusid mudan halkan waa in taariikhqorihii cod kama dambaysta ah ayaa sidoo kale aad u saamaxaaya in ay sameeyaan ringtones iyo edit macluumaadka aasaasiga ah ee faylka codka. Riix icon dawan iyo bitmap ah ka muuqan doontaa hooseysa. Dooro qayb kasta oo aad jeceshahay iyo badbaadin telefoonada aad. Wixii sixiddiisa macluumaad aasaasi ah oo ku saabsan file codka, waxaad xaq u-riixi kartaa codka dooro View Detail. Markaas xaalkaa macluumaadka ku saabsan khaanadda saxda ah. Ma rabtaa in aad leedahay isku day ah oo hadda? Just ka hor tago oo aan u aragno in ay aaminsan yihiin.